Archive du 20180105
Marc Ravalomanana Efa azony ny fandresena
Fandresena miezinezina ho an’i Marc Ravalomanana sy ny Malagasy manontolo ny nahalany azy ho olon’i Afrika 2017, izay sambany teo amin’ny tantara. Fivoahan’ny vokatra amin’ny fomba ofisialy anio 05 janoary 2018 amin’ny 2ora tolakandro any Centrafrique sisa andrasana, fa ny fandresena tamin’ilay fifaninana “ALM Person of the year 2017”, karakarain’ny Gazety boky African Leadership Magazine kosa dia efa lasan’i Marc Ravalomanana ny tao amin’ny sokajy haitarika ara-politika na ny “Political Leadership” no nisy an’i Marc Ravalomanana nisy azy, izay 6 izy ireo no nifaninana.
Tsy manan-tsafidy ny HVM Fomba maizina sisa hianteherana
Miha mafana ny raharaham-pirenena amin’izao fotoana akaiky fifidianana izao. Mbola mandeha ny ady hevitra isan-karazany momba ny fitsipi-dalao amin’ny fanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena. Mitaky ny hisian’ny fitsipi-dalao mazava sy hifanarahana ny herivelona maro eto amin’ny firenena: antoko politika, firaisamonim-pirenena, fikambanana,…
Fanesorana ny praiminisitra Mampizara ny HVM
Ho tanterahana amin’io herinandro ambony io ny fivoriana tsy ara-potoana eny amin’ny antenimieram-pirenena raha araka ny fantatra, mba hahafahana mandinika ny volavolan-dalàm-pifidianana.Milaza ny tsy mbola naharay fiantsoana ny amin’izany anefa ireo solombavambahoaka nanontaniana omaly na ny avy amin’ny antokon’ny fitondrana io na ireo mpanohitra.
Fanoratana anarana anaty lisi-pifidianana Tsy dia marisika firy ny olona
Mbola tena ambany be ny tahan’ny fahavitrihan’ny olona hanamarina ny anarany ao anatin’ny lisi-pifidianana ary ambany manarak’izany ny olona vaovao voasoratra ao anatin’ny lisi-pifidianana, hoy ny filoha lefitry ny CENI Thierry Rakotonarivo.
Pasitera Mailhol “Tena ho mafy ny krizy 2018”
2018, taom-pifidianana. Nigadona izy ity. Na ny avy eo anivon’ny vaomiera mahaleotena misahana ny fifidianana (CENI) aza dia efa niaiky tamin’ny faramparan’iny taona vao nilaozana iny fa efa mafampana sahady ny toe-draharaha.
Raha tena hisy tokoa ilay fifidianana. Izay ho filoha lohalaharana. Aoka re mba ahay hisafidy, Fa tsy hijabaka any amin'ny mangidy.
Nitombo hery ny rivodoza AVA Haherin’ny 100 km/ora ny tafio-drivotra hoentiny
Tany amin'ny 210 Km Avaratra Atsinanan'i Toamasina no nisy ny foiben’ilay rivodoza “Ava” Omaly 04 janoary tamin’ny 06 ora hariva. Mizotra miankandrefana hatrany izy amin'ny hafaiganam-pandeha 10 Km/ora. Mihamanatona ny morontsiraka Atsinanan'i Madagasikara, ka manodidina eo amin'ny 105 Km/ora ny rivotra entiny ary mety hihoatra hatramin'ny 140 Km/ora ny tafiotra miaraka aminy.
Olana ara-tany any Toamasina Vaky ny ady eo amin’ny Katolika sy ny Fanjakana
Tao anatin’ny 5 taona no nitady vahaolana mikasika ny olana ara-tany sedrain’ny fikambanana eo ambany fitantanany ny Fiangonana Katolika aoToamasina, noho ny fibodoan’ity tovolahy iray ity ny tany nahazoan’izy ireo alalana mazava sy vao noavaozina izay nosoniavin’Atoa Rakotovao Rivo tamin’izy minisitry ny fambolena ny 10 aogositra 2017, saingy hatramin’izao dia tsy hita izany ary vao mainka aza miha lalina noho ity tovolahy ity mirehareha ho manana namana mpitsara sy sakaizana mpitandro ny filaminana ary milaza koa fa zanaky ny mpiasan’ny minisiteran’ny fambolena teo aloha.
Fiainana mpanakanto Nisaraka i Big Mj sy Arnaah
Enin-taona niarahana ary nivady tao anatin’ny herintaona ireo mpanakanto roa Big Mj sy Arnaah, saingy nisaraka amin’izao fotoana izao. Ny alin’ny alarobia teo I Big Mj no nanao fanambarana tamim-pomba ofisialy tao anatin’ny kaonty Facebook’ ny momba ity vaovao ity.
Izay nafafy no honjinjaina
Sarotra ny hino sy hanantena, fa mba ho tonga saina sy hahalala ny tokony hataony ity fitondran-dRajaonarimampianina ity. Ny fanenjehana sy ny tsindry mahzo azy ve no mafy ka vao mainka tsy mahita izay horaisiny izy sa izao ilay hoe tànana efa zatra mitsotra? Miliba, mifety, mirevy, manao kolikoly,… izay aloha no hita sy misongadina.
Arina fandrehitra Niakatra 3000 Ar isaky ny gony sahady ny vidiny
Ankoatra ny fiakaran’ny vidim-bary eny an-tsena izay efa mahatratra 730 Ar ny iray kapoaka hatramin’ny omaly dia nahitana fiakarany 3.000 Ar isaky ny gony iray ihany koa ny vidin’ny arina fandrehitra eto an-drenivohitra.